Ahoana no mba nahalala ny tovovavy
Maro aminareo dia mikasika ny fomba hahazoana mahalala ny tovovavy. Izany no mafy indrindra ho an’ireo izay mbola tanora loatra dia mihevitra ny olon-dehibe ireo fomba fifandraisana sy ny fiarahana. Izany hoe, ny olana dia tena mahazatra rehefa misy ankizilahy — taona mieritreritra fa: izaho te-hahafantatra ny ankizivavy, fa tsy fantatro hoe inona no hanaovana izany. Mba hamahana ireo olana maro izay hitsangana sahady amin’izao taona monja, izaho manoratra ity lahatsoratra ity. Raha vao jerena, izany no tena sarotra. Rehefa dinihina tokoa, raha ianao, na dia taona maro taloha, mbola eo ambany ny fanaraha-maso ny olon-tiana, sy ny sehatry ny fifandraisana dia tena voafetra. Fa raha ny tena izy, izany no mahatonga azy mora kokoa ny mahazo ny mahafantatra ny tovovavy — taona. Azo inoana, ny ankamaroan ny fotoana, ianao mandany azy any an-tsekoly. Eny, izany no marina, satria ny fianarana ho anareo, izao no zava-dehibe indrindra. Fa mifanindran-dàlana amin’ny fianarana any an-tsekoly izany dia mora ny hanomboka ny olom-pantatra sy ny ankizivavy. Tsy ianao ihany fa samy tony rivotra iainana. Afaka mangataka ny mpiara-mianatra momba ny lesona manaraka, inona no nanontany an-trano, etc. Dia tsikelikely manomboka manontany tena hoe ahoana ny anarana, na dia tia an-tsekoly, izay izy no ao an-maimaim-poana fotoana, sns. Word for word, eto sy nihaona. Manohy mampita, ary ianao dia ho namana. Ary raha toa ka te-hahazo nahalala ny zazavavy, izay tsy fianarana ao amin ny kilasy. Ahoana no mba nahalala ny tovovavy. Vao tonga ny aina sy ny hihaona. Raha izany no mampatahotra ny mandeha tsara, ka milaza Hi, inona no ny anarana, miezaka hahazo azy mba hiray fo voalohany. Niatrika ao an-dalantsara, nandritra ny fiovana, mitsiky azy, raha toa izy ka nianjera na zavatra mianjera, hanampy azy mba hitsangana na haka ny lavo zavatra, sns. Dia mahatonga ny fihetseham-po tsara, izy dia mahatsiaro anao, ary avy eo dia afaka vao tonga ka milaza: Matetika aho mahita anao amin’ny fiovana, dia toa mahaliana ahy, aoka isika hahafantatra, izay no anarany. Raha ny ankizivavy dia ara-dalàna ary koa nampiseho famantarana ny saina manoloana anao (mitsiky, nanao hoe misaotra anao noho ny manampy, sns.), dia izy no ho fihetsiky ny fanontaniana tsara, dia hahazo nahalala. Voalohany ianao dia afaka miresaka amin’ny sekoly foto-kevitra: izay tia ny zavatra eo sekoly, inona no lesona no tiako indrindra, miady hevitra ny mpampianatra. Ary avy eo dia afaka hampandeha tsara fanasongadinana ny lohahevitra hafa: fialam-boly, ny fialam-boly ny asa, ny toerana tena mozika, sns. Raha tianao, dia afaka miezaka ny manasa azy handray an-tongotra. Ary indray: raha te-hahafantatra ny zazavavy nandritra ny fotoana ela, ary izy mazava ho azy fa maneho fiaraha-miory ho anareo, fa izy no tsy mety, amim-pahasahiana ny fomba voalohany sy hahafantatra. Misy be dia be ny tovovavy saro-kenatra tany amin’ny sekoly izay liana amin’ny ankizilahy, fa izy ireo dia matahotra mba mahazo mahafantatra voalohany, izany, dia tsara kokoa ho an’ny ankizilahy mba handray andraikitra. Noho izany antony izany, ny hetsika ivelan’ny fianarana faribolana ny zavatra mahaliana na ny fanatanjahan-tena fizarana tonga lafatra — eto anao dia ny tompo ary arakaraka izay te-hihaona, misy mitady. Mba hisarihana ny sain’ny ny namany, ny zavatra iray mba ho samy hafa avy amin’ny hafa. Ary satria ianao dia mieritreritra momba ny fomba hahazoana nahalala ny zazavavy, tonga ny fotoana mba mitsahatra manenjika ny baolina ry zalahy. Sonia tao amin’ny faribolana, ary izany dia hanome anao be dia be tombony. Dia manitatra ny fahalalany sy ho tonga bebe kokoa mandroso. Faharoa plus — ho tsy manam-paharoa, dia midika izany, mahaliana kokoa ho an’ny ankizivavy. Eny, ary mahita ny foto-kevitra iombonana fa ny resaka eto dia tsotra: azonao atao ny manomboka amin’ny fifanakalozan-kevitra ny zavatra ataonao ao amin’ny faribolana, ary avy eo dia mahazo nahalala.
Raha tsy izany, dia tonga ny fotoana mba hanatevin-daharana. Ny fiarahana amin’ny alalan’ny tambajotra sosialy no tena mety sy ny mora. Eo amin’ny fiaraha-monina mandroso ny ankizivavy koa dia afaka mampiasa Komatke na Facebook, ka mampiasa izany am-pahendrena. Soa ihany, ny mpamorona ny loharanon-karena dia tonga amin’ny fomba maro ny mitandrina sy hitaona ny zazavavy s ny saina ho anao. Ahoana no hahafantatra ny ankizivavy ao amin’ny tambajotra sosialy. Ny zava-drehetra tsotra ary mora kokoa eto. Manoratra fotsiny ny hafatra: Miarahaba, izaho tia anao.
Aho te hihaona aminao
Avy eo dia jereo ny fomba ny zazavavy ataony. Raha tsy mamaly na valiny ratsy, tsy ho tezitra, tsy misy olona afaka lalandava ary mandrakariva ny toy izany, izany no zava-misy. Vao hanohy ny fiarahana miezaka, nefa efa tamin’ny zazavavy hafa. Ao amin’ny resaka tao amin’ny tambajotra sosialy zava-dehibe tsy mba ho tsy mahalala fomba, tsy mba mikiry nifankafantarana raha misy olona tsy te-hahafantatra izany. Mifandray tsara kokoa, mangataka ny tsirairay sy ny mamaly ny fanontaniana. Angataho ny ankizivavy iray fanontaniana mahaliana, umbonal ireo, ireo izay afaka mamaly tsy hoe eny na tsia, fa tsipiriany kokoa. Tsara, amin’ny farany, tsy hanipy indray izany ny fotoana-voasedra fomba ahoana no hahafantatra ny zazavavy noho ny namany. Rehefa dinihina tokoa, ny olom-pantatra mahazatra dia fomba lehibe mba hahita ny fiteny iombonana, tombontsoa iombonana na fara faharatsiny, tsy voatery ho tanteraka amin’ny tsy fahalalana ny iray hafa. Izao anao hahafantatra ny fomba hahazoana mahafantatra ny zazavavy tsy misy olana. Tsy ho saro-kenatra, manandrana, improvise, fa hijanona ao foana ny tenanao. Rehefa dinihina tokoa, raha tianao ny zazavavy iray ny anjara asany, dia afaka manohy milalao mandrakizay. Ankoatra izany, dia fitaka ny an ny tenany sy ho azy. Ary mba hamitaka, araka ny fantatsika, dia tsy tsara
← Lahatsary amin'ny chat online
Dokam-barotra mampiaraka maditra →